8 Zvino ava ndivo vaiva vakuru vedzimba dzemadzibaba+ avo uye ndiko kwaiva kunyorwa maererano nemadzinza+ kwevaya vaienda neni munguva yokutonga kwamambo Atashasta+ vachibva kuBhabhironi: 2 Pavanakomana vaFiniyasi,+ Geshomu; pavanakomana vaItamari,+ Dhanieri;+ pavanakomana vaDhavhidhi,+ Hatushi; 3 pavanakomana vaShekaniya uye pavanakomana vaParoshi,+ Zekariya, uye vanhurume zana nemakumi mashanu vakanyorwa pamwe chete naye; 4 pavanakomana vaPahati-moabhi,+ Erieho-enai mwanakomana waZerahiya aiva nevanhurume mazana maviri; 5 pavanakomana vaZatu,+ Shekaniya mwanakomana waJahazieri aiva nevanhurume mazana matatu; 6 pavanakomana vaAdhini,+ Ebhedhi mwanakomana waJonatani aiva nevanhurume makumi mashanu; 7 pavanakomana vaEramu,+ Jeshaya mwanakomana waAtariya aiva nevanhurume makumi manomwe; 8 pavanakomana vaShefatiya,+ Zebhadhiya mwanakomana waMikaeri aiva nevanhurume makumi masere; 9 pavanakomana vaJoabhi, Obhadhiya mwanakomana waJehieri aiva nevanhurume mazana maviri negumi nevasere; 10 pavanakomana vaBhani,+ Sheromiti mwanakomana waJosifiya aiva nevanhurume zana nemakumi matanhatu; 11 pavanakomana vaBhebhai, Zekariya mwanakomana waBhebhai+ aiva nevanhurume makumi maviri nevasere; 12 pavanakomana vaAzgadhi,+ Johanani mwanakomana waHakatani aiva nevanhurume zana negumi; 13 pavanakomana vaAdhonikamu,+ vaya vakanga vari vokupedzisira, uye mazita avo aiva: Erifereti, Jeyieri naShemaya, vaiva nevanhurume makumi matanhatu; 14 pavanakomana vaBhigvhai,+ Utai naZabhudhe, vaiva nevanhurume makumi manomwe. 15 Ndakavaunganidza parwizi+ runouya kuAhavha:+ uye takaramba takadzika musasa ipapo kwemazuva matatu, kuti ndinyatsotarira vanhu+ nevapristi,+ asi hapana nomumwe chete wevanakomana vaRevhi+ wandakawana ipapo. 16 Naizvozvo ndakashevedza Eriyezeri, Arieri, Shemaya naErinatani naJaribhi naErinatani naNatani naZekariya naMeshuramu, vakuru, uye ndakashevedza Joyaribhi naErinatani, varayiridzi.+ 17 Ndakabva ndavarayira pamusoro paIdho mukuru munzvimbo inonzi Kasifiya, uye ndakaisa mumuromo mavo mashoko+ okutaura kuna Idho nehama dzake vaNetinimu+ vari munzvimbo inonzi Kasifiya, kuti vauye nevashumiri+ veimba yaMwari wedu. 18 Naizvozvo vakauya navo, maererano noruoko rwakanaka+ rwaMwari wedu rwaiva patiri, munhu akangwara+ anobva kuvanakomana vaMari+ muzukuru waRevhi+ mwanakomana waIsraeri, ainzi, Sherebhiya+ nevanakomana vake nehama dzake, gumi nevasere; 19 Hashabhiya pamwe chete naJeshaya wokuvanakomana vaMerari,+ hama dzake, nevanakomana vadzo, vaiva makumi maviri. 20 KuvaNetinimu, vakaiswa pabasa revaRevhi naDhavhidhi nemachinda, kwaiva nevaNetinimu mazana maviri nemakumi maviri, vose vakanga vasarudzwa nemazita avo. 21 Ndakabva ndazivisa kuti titsanye ipapo parwizi rwaAhavha, kuti tizvininipise+ pamberi paMwari wedu, kuti titsvake kwaari isu nevana vedu+ nezvinhu zvedu zvose nzira yakarurama.+ 22 Nokuti ndakanyara kukumbira uto+ rehondo nevatasvi vemabhiza+ kuna mambo kuti ritibatsire pakurwisana nomuvengi munzira, nokuti takanga tati kuna mambo: “Ruoko+ rwaMwari wedu ruri pane vose vanomutsvaka nokuda kwezvakanaka,+ asi simba rake nokutsamwa kwake+ zvinorwisana navose vaya vanomusiya.”+ 23 Naizvozvo takatsanya+ tikakumbira+ kuna Mwari wedu pamusoro peizvi, zvokuti akabvuma kutetererwa+ nesu. 24 Zvino pavakuru vevapristi ndakatsaura gumi nevaviri, vaiti, Sherebhiya,+ Hashabhiya,+ uye vaiva nehama dzavo gumi. 25 Ndakavayerera sirivha nendarama nemidziyo,+ mupiro weimba yaMwari wedu wakanga wapiwa namambo+ nemakurukota ake+ nemachinda ake nevaIsraeri+ vose vakanga varipo. 26 Nokudaro ndakavayerera mumaoko avo matarenda esirivha+ mazana matanhatu nemakumi mashanu nemidziyo yesirivha zana inokosha matarenda maviri, uye matarenda zana endarama, 27 nendiro duku dzendarama makumi maviri dzinokosha madhariki chiuru nemidziyo miviri yemhangura yakanaka, youtsvuku hwaipenya, yaikosha sendarama. 28 Ndakabva ndati kwavari: “Imi muri chinhu chitsvene+ kuna Jehovha, uye midziyo+ yacho chinhu chitsvene, uye sirivha nendarama chinhu chinopiwa chokuzvidira kuna Jehovha Mwari wemadzitateguru enyu. 29 Rambai makamuka uye rindai kusvikira mazviyera+ pamberi pevakuru vevapristi nevaRevhi nemachinda emadzibaba aIsraeri muJerusarema, muimba dzokudyira+ dzeimba yaJehovha.” 30 Vapristi nevaRevhi vakagamuchira sirivha nendarama nemidziyo zvakayerwa, kuti vaende nazvo kuJerusarema kuimba yaMwari wedu.+ 31 Takazobva parwizi rwaAhavha+ pazuva rechigumi nemaviri romwedzi wokutanga+ kuti tiende kuJerusarema, uye ruoko rwaMwari wedu rwakanga ruri patiri, zvokuti akatinunura+ pachanza chomuvengi nevakanga vakativandira panzira. 32 Naizvozvo takasvika kuJerusarema+ tikagara ikoko mazuva matatu. 33 Pazuva rechina takayerera sirivha nendarama+ nemidziyo+ yaiva muimba yaMwari wedu mumaoko aMeremoti+ mwanakomana womupristi Urija naEriyezari mwanakomana waFiniyasi waaiva naye naJozabhadhi+ mwanakomana waJeshua naNoadhiya mwanakomana waBhinui+ vaRevhi vavaiva navo, 34 maererano nokuwanda uye nokurema kwezvinhu zvose, pashure pacho kurema kwacho kwose kwakanyorwa panguva iyoyo. 35 Vaya vaibva pakutapwa, vaichimbova nhapwa,+ vakauya kuna Mwari waIsraeri nezvibayiro zvinopiswa,+ nzombe gumi nembiri+ nokuda kwevaIsraeri vose, makondohwe+ makumi mapfumbamwe nematanhatu, makwayana makono makumi manomwe nemanomwe, nhongo gumi nembiri+ kuti chive chinopiwa chechivi, zvinhu zvose sechinopiwa chinopisirwa Jehovha. 36 Takabva tapa machinda+ amambo nemagavhuna+ aiva mhiri kwoRwizi+ mitemo+ yamambo, uye vakabatsira vanhu+ neimba yaMwari wechokwadi.